Iifayile | January 2022
Eyona > Iifayile
ICortana ayisasebenzi - isisombululo esisebenzayo
Ndiyilungisa njani iWin32k Sys? Ukulungiswa okungu-3 kwe-win32k. Hlaziya izixhobo ze-Windows 10, 7 kunye ne-8.1 Hlaziya izixhobo zakho zokuqhuba. 2021
ipakethe yokuqhuba ikhuselekile
Ngaba indawo yokuqhuba ikhuselekile-isisombululo esinokubakho
Ndiyilungisa njani i-OpenCL DLL engekho Windows 10? Ukuhamba ngokukhawuleza: Malunga ne-OpenCL. Ukulungisa i-1: Khuphela i-OpenCL. Faka ifayile ye-Dll kwenye i-PC, Fix 2, Hlaziya uMqhubi weKhadi leMizobo, Fix 3: Phinda ufake kwakhona uMqhubi weKhadi leMizobo, Fix 4: Phinda ufake iNkqubo yeNgxaki, Fix 5: Gcina iiWindows zakho, uFix 6: Sebenzisa iFayile yeWindows yeWindows.
Ngaba tweaking.com ikhuselekile-khangela isisombululo
Ndingena njani kwifolda yeNetHood? Re: NetHood Yifolda yenkqubo, ke kwiWindows Explorer, kuya kufuneka uhambe Izixhobo> Izinketho zeFolda> Jonga ithebhu, kwaye wenze ukuba inkqubo yeefayile ezikhuselweyo ijonge. Ngaphezulu kwayo, ukufikelela kwifolda yeNetHood, kuya kufuneka uthathe ubunini bayo. 20 dec. Ngo-2008
Yintoni iprofsvc-sisombulula njani
Zeziphi iimpazamo kwi-Distributedcom? Impazamo yeDCOM ihlala isenzeka xa isicelo okanye inkonzo izama ukusebenzisa i-DCOM kodwa ingenazo iimvume ezifanelekileyo. Uninzi lwexesha, iimpazamo ze-DCOM azizukuyichaphazela inkqubo yakho, ngaphandle kokuvala isiBonisi soMsitho.
Yintoni msert.exe-indlela yokujongana nayo
Yintoni iSEEK kwikhompyuter yam? ISEEK ImpenduloWorks (ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi-ISEK Impendulo yeNgxelo yeXesha lesiXeko) sisicelo se-injini yokukhangela ejolise ekwenzeni ukukhangela kuqhubele phambili. Isicelo sinako ukuqhubekeka imibuzo kunye namabinzana abhalwe ngolwimi lwemihla ngemihla.
Yintoni i-rpsystray-iNcwadi egqibeleleyo
Ndiyilahla njani iPCDr? Ukuba awukwazi ukufumana inkqubo kwiPaneli yokuLawula okanye kuluhlu lweeNkqubo, yiya kwifolda yeDatha yeNkqubo kwaye ucime ifolda yePCDr ngokupheleleyo. Ukuba awukwazi ukucima ifolda ye-PCDr ngesiqhelo, ke qala ikhompyuter yakho kwiMeko eKhuselekileyo kwaye ucime ifolda.
uhlaziyo lokuqhuba lusemthethweni
Ngaba uhlaziyo lokuqhuba lusemthethweni- ungathatha njani isigqibo
Yintoni ifayile iFrmewrk EXE? iFrmewrk.exe yinkqubo enxulunyaniswa ne-Intel PRO / Setha isoftware engenazingcingo kwaye ibonelela ngeendlela zokhetho zokucwangciswa kwezi zixhobo. Le nkqubo ayibalulekanga kwinkqubo, kodwa akufuneki ipheliswe ngaphandle kokuba kurhanelwa ukuba kubangela iingxaki.
Ngaba i-neosmart ikhuselekile - izisombululo kwiingxaki
Ndingayilahla njani i-TMP Drivedownload? Nantsi into endiyenzileyo: Kwindlela yokusebenza yebar (ukwenza imisebenzi) cofa ekunene kwi-OneDrive emva koko ngakumbi, emva koko useto, emva koko ukhethe iifolda. tmp. Iifayile (ze) zeDriveDownLoad kwaye ungazikhangeli. Yiya kwi-OneDrive yakho ekwi-intanethi (ngesikhangeli sewebhu) kwaye ucime igama elifanayo kwifolda (. Tmp. DriveDownLoad) .5 mei 2019
Yintoni i s.yimg-indlela yokulungisa
Yintoni irediyo ye-Intanethi kwaye isebenza njani? Unomathotholo we-Intanethi ubandakanya ukusasaza imithombo yeendaba, ukubonisa abaphulaphuli ngomsasazo oqhubekayo wesandi esingakwaziyo ukumiswa okwesikhashana okanye ukuphindwa, ngokungathi yimidiya yosasazo yesiko; kule meko, yahlukile kwifayile efunekayo yokusebenzela.
Yintoni ielowutil.exe -izigqibo ezisebenzayo
Ngaba i-UltraViewer ikhuselekile? Unxibelelwano lwe-UltraViewer xa uqhagamshela kwiseva nakwikhompyuter yeqabane likhuselekile kusetyenziswa isitshixo sikawonke-wonke / sabucala seRSA kunye nokubethelwa kweseshoni ye-AES (256-bit). Obu buchwephesha busetyenziswa kwiqonga lewebhu le-HTTPS / SSL kwaye ithathwa njengekhuselekile ngokupheleleyo ngokwemigangatho yangoku yamazwe aphesheya.